भ्याक्सिनमा ढिलाइ नियोजित थियो? « AayoMail
2021,29 April, 1:24 pm
पहिलो चरणका केही लाख भ्याक्सिन दिँदै गर्दा कार्यकर्तालाई सडक आन्दोलनमा उरालिरहेको केपी ओली सरकारले दोस्रो लहरमा अनपेक्षित संकटको ठक्कर भेटेको छ।
दोस्रो लहर नेपाल छिर्ने अनुमान अलि पहिल्यैदेखि भएको हो, युरोपमा फैलिसकेको र भारतमा समेत छिटपुट देखिपरिसकेको अवस्थामा। खासमा त्यतिबेला सरकारी संयन्त्रहरु संसारभर बन्दै गरेका कोरोना भ्याक्सिन छिटोभन्दा छिटो ल्याएर बढीभन्दा बढी जनतालाई सुरक्षित तुल्याउन लागिपर्नु पर्ने हो।
ओलीको पूरै सामर्थ्य विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधमा केन्द्रित हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री र मन्त्रालयको समग्र टोली कुन ध्येयमा लागेको थियो त? एउटा मात्रै भ्याक्सिनको बाटो हेरेर बसेको र त्यसमा निहित स्वार्थ थिए भन्ने वहस अहिले सर्वत्र हुन थालेको छ। यो नियोजित थियो वा अकर्मण्यताको संयोग मात्र?